Onye na-ebupụ Moringa & Mepụta akara Moringa nkeonwe - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / Onye na-ebupụ Moringa & Mepụta akara Moringa nkeonwe
Onye na-ebupụ Moringa & Mepụta akara Moringa nkeonwe
Ị chọrọ ịme ngwaahịa Moringa nke gị?
Ozi ọma! Anyị nwere ike mepụta ngwaahịa moringa agwụla site na iji akara nkeonwe / akara moringa / ọcha nke Moringa Oleifera
Hapụ anyị niile mmepụta usoro, ị dị nnọọ na-enweta ikpeazụ okokụre ngwugwu ngwongwo n’okpuru gị ika.
Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ B2C, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ & cafes, ndị nwe ụlọ nri, ụlọ ọrụ ịzụ ahịa, wdg. Biko kpọtụrụ anyị site na nọmba WhatsApp + 62-877-5801-6000
Ccmpany anyị bụ onye na-emepụta ihe, onye na-ebubata na onye na-ebupụ ntụ ntụ ahịhịa Moringa, mkpụrụ Moringa na mmanụ Moringa.
Anyị bụ ụlọ ọrụ Moringa agbakwunyere nke na-ahụ maka ijikwa ugbo Moringa n’ichepụta ọnụ ahịa ngwaahịa Moringa agbakwunyere.
Anyị na-ebupụ ntụ ntụ ahịhịa Moringa n’ihe karịrị mba 20 n’ụwa niile.
Ọtụtụ n’ime ụdị ndị na-emepụta ihe na-edozi ahụ na-eji ntụ ntụ akwukwo Moringa anyị na usoro ha.
Ugbo Moringa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị dị na West Nusa Tenggara Province Na Indonesia, kilomita site na mkpọkọ okporo ụzọ na ụlọ ọrụ mmetọ.
Anyị na ọtụtụ narị obere ndị ọrụ ugbo na-arụkọ ọrụ ma guzobe ọha na-azụ ahịa ziri ezi iji zụlite Moringa kacha mma n’ụwa na ihu igwe okpomọkụ. Anyị nwere eriri ọkọnọ zuru oke.
Enwere ike ịchọta ngwaahịa anyị niile na ugbo ebe o si malite. Anyị na-enye ngwaahịa Organic Moringa kacha mma ozugbo sitere na isi mmalite.
N’agbanyeghị na akwụkwọ Moringa pere mpe, nwere ọtụtụ uru ahụike dị mkpa. N’ezie, ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ya osisi anwansi (Osisi Ọrụ ebube). Akwụkwọ Moringa nwere ọdịdị oval, na obere nha a haziri nke ọma n’osisi, a na-esikarị ya dị ka akwụkwọ nri maka ọgwụgwọ. A malitela nyocha maka ịdị irè nke akwụkwọ Moringa kemgbe 1980, na akwụkwọ, na ogbugbo, mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi.
Òtù Ahụ́ Ike Ụwa bụ́ WHO tụrụ aro ka ụmụaka na ụmụ ọhụrụ nọ n’oge ha dị ọhụrụ rie ya, n’ihi uru dị n’ime akwụkwọ Moringa buru ibu, bụ́ nke nwere: Potassium ji okpukpu atọ karịa unere, calcium okpukpu anọ karịa mmiri ara ehi, vitamin ugboro asaa. C karịa oroma, vitamin A ugboro anọ karịa karọt, protein ugboro abụọ karịa mmiri ara ehi.
Otu WHO kpọrọ osisi Moringa dị ka osisi ọrụ ebube, ka ha chọpụtachara uru dị mkpa dị n’akwụkwọ Moringa. En.wikipedia.org Ihe karịrị ọmụmụ 1,300, akụkọ na akụkọ akọwawo uru Moringa na ikike ịgwọ ọrịa ya, nke dị mkpa n’ịlụso ọrịa ọgụ na nsogbu erighị ihe na-edozi ahụ. Nnyocha na-egosi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke osisi Moringa nwere ihe ndị dị mkpa, nke enwere ike iji ya mee ihe n’ọtụtụ ụzọ.
Uru akwukwo Moringa.
Jikwaa ibu arọ.
Ihe dị mkpa na-ekwesịghị ichefu bụ ka aru na-edozi ahụ na ibu ya. Nnyocha ndị ọkachamara mere chọpụtara na tii Moringa na-enyere aka ịnagide nsogbu mgbari nri nke uru ya bụ ịkwalite metabolism nke ahụ maka ọkụ calorie kacha mma.
Tii emere site na akwukwo Moringa nwere nnukwu polyphenols, nke na-arụ ọrụ dị ka antioxidants. Uru nke antioxidants iji detoxify nsị na ahụ, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Wepu ntụpọ ihu.
Ngwakọta dị mfe, were akwụkwọ Moringa na-eto eto ole na ole, gbanye ruo mgbe ọ dị mma, wee were ya dị ka ntụ ntụ (ma ọ bụ nwekwara ike ịgwakọta ya na ntụ ntụ), na mba ụfọdụ a na-eji Moringa wepụ dị ka ihe eji eme ihe ịchọ mma maka ihe ịchọ mma. akpụkpọ anụ. Akụkụ osisi Moringa nke a na-ejikarị eme anụ ahụ bụ ogbugbo, akwụkwọ, ifuru na mkpụrụ.
Akwụkwọ Moringa nwere ihe oriri dị ka calcium na mineral dị ka ọla kọpa, iron, zinc (zinc), magnesium, silica na manganese. Akwụkwọ Moringa nwekwara ike bụrụ ihe na-eme ka mmiri dị n’okike, nwere ihe eji ewepụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ nwụrụ anwụ ma sachaa akpụkpọ ahụ.
Akwụkwọ Moringa nwere ihe karịrị 30 antioxidants bara uru maka ahụ ike anụ ahụ. Akwụkwọ Moringa bara ụba na mineral na amino acids nwere ike inye aka mepụta collagen na protein keratin, nke dị mkpa maka ahụike anụ ahụ niile dị n’ime ahụ.
Enwere ọtụtụ ụdị ngwaahịa ịchọ mma a ma ama na-eji mmanụ Moringa dị ka akụrụngwa maka ngwaahịa ha. Karịsịa ngwaahịa na-ahụ maka anụ ahụ dị ka ude na-egbochi ịka nká, ude na-egbochi ịsa ahụ, mmanụ aromatherapy, ụfụfụ ihu, ude mmiri, ude na-enwu gbaa na deodorants.
Uru osisi Moringa a dị mkpa maka ahụike na ịma mma akpụkpọ ahụ, malite na akwụkwọ Moringa, mmanụ Moringa na ifuru Moringa. A na-ejikarị ifuru Moringa dị ka ihe eji eme ihe ịchọ mma na ihe na-esi ísì ụtọ, colognes, mmanụ ntutu na mmanụ aromatherapy. Okooko osisi Moringa nwere oke oleic acid, a nụchara nke ọma ka ọ bụrụ mmanụ. Enwere ike ịdabere na mmanụ ifuru Moringa iji nweta ma jigide ísì.
Iji akwụkwọ Moringa mee ihe maka ịma mma.
Kedu? buru ụzọ mee mpempe akwụkwọ Moringa. Họrọ akwukwo Moringa nke ka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma dị ọhụrụ, dị iche na alaka ya. Ghichaa akwụkwọ Moringa site n’ịgbakwụnye ntakịrị mmiri (nke mere na akwụkwọ Moringa na-etolite mado). Mgbe ahụ, ejiri ya dị ka ihe mkpuchi, enwere ike ịchekwa akwụkwọ nri Moringa maka ụbọchị 3 n’ime friji.
Akwụkwọ Moringa na-enye ndị nne na-enye nwa ara nri.
Mmepe nke uru osisi Moringa na Indonesia dị obere oge ma e jiri ya tụnyere mba ọzọ. Otú ọ dị, a ka nwere ohere ịmepụta ya maka òkè ahịa ụlọ na mbupụ. Enwere nnukwu ikike ịzụlite ahịa maka abamuru nke osisi Moringa n’ịkwalite oriri na-edozi ahụ na ndị nne na ụmụ na-enye nwa ara.
Akwụkwọ Moringa nwere protein, iron, na vitamin C. Na mgbakwunye, enwerekwa flavonoid element nke uru ya bụ inyere ndị nne na-enye nwa ara aka ịmịpụta mmiri ara ara. Ọdịnaya protein na-eme ka mmiri ara ara dị mma.
Ọdịnaya dị elu nke ígwè, nke dị okpukpu 25 dị elu karịa akwụkwọ nri, na-atụ aro ka ndị nne rie ya mgbe ha mụsịrị nwa, ebe ụmụ nwanyị na-ahụ nsọ na-atụfukarị ígwè. Maka ụmụaka, enwere ike iri ya kemgbe nwa ọhụrụ, ya bụ ụmụ ọhụrụ karịrị ọnwa isii. Ụmụ nwanyị dị ime kwesịrị izere iri akwụkwọ Moringa n’oge ime ime, ọkachasị n’ime ọnwa mbụ nke mbụ.
Anya dị mma.
Akwụkwọ Moringa nwere nnukwu ọdịnaya nke vitamin A nke dị ezigbo mma maka anya. Iri akwụkwọ Moringa bara uru ka akụkụ anya na-adịkwa mma mgbe niile.
Enwere ike iji akwụkwọ moringa gwọọ ọrịa anya, a ga-eri ya ozugbo (mgbe emechara akwụkwọ ya). Akwụkwọ Moringa nwere ọtụtụ ihe oriri na-edozi ahụ, otu n’ime ha bụ vitamin A na calcium.
Ọdịnaya vitamin A dị na akwụkwọ Moringa bara uru maka ichekwa ahụike anya, ma ọ na-amalite ibelata ihe ize ndụ nke gbakwunyere, mwepu, cylinder na anya cataract. Akwụkwọ Moringa na-adịkwa mma mgbe ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga na-eri ya ma bara uru maka ikpochapụ anya ha.
Antioxidant na mgbochi mkpali ogige.
Dị ka otu akụkọ e bipụtara na Asia Pacific Journal of Cancer Prevention si kwuo, akwụkwọ Moringa nwere ngwakọta nke amino acid dị mkpa, carotenoid phytonutrients, antioxidants dị ka quercetin, na ogige nje bacteria na-eme dị ka ọgwụ mgbochi mkpali.
Akwụkwọ Moringa nwere ọtụtụ ogige mgbochi ịka nká nke nwere ike ibelata mmetụta nrụgide oxidative na mbufụt. Uru ndị a na-akawanye mma na ọnụnọ polyphenolic ogige, vitamin C, beta-carotene, quercetin, na chlorogenic acid jikọtara ogige ndị a na mbelata ihe ize ndụ nke ọrịa na-adịghị ala ala, dị ka afo, ngụgụ, cancer colon, ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, na ọrịa anya n’ihi ihe ize ndụ. afọ.
Na-elekọta ahụike akụrụ.
Iri nri ahụike na-akpaghị aka na-enyere akụrụ aka ịrụ ọrụ nke ọma (ọrụ), ma ọ bụghị nri adịghị mma (otu n’ime nri nwere oke abụba) ga-agbakọba na akụrụ na-akpata nsogbu ahụike. Iri akwụkwọ Moringa, na-enyere aka iweghachi ahụike akụrụ nke nọlarị n’ọnọdụ ọjọọ.
Na-ebelata mmetụta nke ịka nká.
Nnyocha 2014 e bipụtara na Journal of Food Science and Technology nwalere uru Moringa. N’ịmara banyere ọkwa nke enzymes antioxidant bara uru, ndị nchọpụta chọrọ nyocha ma akwụkwọ Moringa nwere ike inye aka belata mmetụta nke ịka nká, site na iji ọgwụ antioxidants eke, nke na-enwe ike ịhazigharị homonụ n’ụzọ nkịtị.
Ọmụmụ ihe ahụ metụtara ụmụ nwanyị iri itoolu gachara mechaa mechaa mechaa mechaa bụ ndị nọ n’agbata afọ 45 ruo 60 kewara ụzọ atọ, bụ́ ndị e nyere ọkwa dị iche iche nke mgbakwunye. Nsonaazụ gosiri na mgbakwunye na Moringa na spinach mere ka mmụba dị ukwuu na ogige antioxidant, nke na-ekere òkè dị mkpa n’ibelata mmetụta nke ịka nká.
Enwere ike iji akwụkwọ Moringa na-agwọ ọrịa reumatism.
Iji akwụkwọ Moringa na-agwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na-ebelata mgbu na nkwonkwo ma belata mmụba nke uric acid na nkwonkwo, nke dị oke mkpa n’imeri nsogbu nke rheumatism ma ọ bụ gout. Enwere ike iji uru nke akwukwo Moringa a mee ihe maka rheumatism, mgbu, mgbu, wdg.
Gbochie ọrịa obi.
Nnyocha anụmanụ ụlọ nyocha e bipụtara na mbipụta February 2009 nke “Journal of Medicinal Food” chọpụtara na akwụkwọ Moringa na-egbochi mmebi obi ma na-enye uru antioxidant. N’ime ọmụmụ ihe, dose nke 200 milligrams kwa kilogram nke arọ ahụ kwa ụbọchị maka ụbọchị 30 butere ọkwa dị ala nke lipids oxidized, ma chebe anụ ahụ obi site na mmebi nhazi. Ndị nyocha ahụ kwubiri na akwụkwọ Moringa na-enye nnukwu uru maka ahụike obi. A ka na-achọ nyocha ọzọ iji wusie nchoputa ndị a ike.
Uru Akwụkwọ Moringa baara ụmụ nwanyị.
Maka ụmụ nwanyị, iri akwụkwọ Moringa nwere ike ọ gaghị abụ ihe ọhụrụ. Ekwenyere na akwụkwọ Moringa dị mma maka idobe ahụike akụkụ ahụ ụmụ nwanyị. Mana ọ tụgharịrị na uru akwụkwọ Moringa baara ụmụ nwanyị dị ọtụtụ. Uru ndị a gụnyere;
Na-egbochi anaemia n’ime ụmụ nwanyị dị ime.
Anaemia bụ ọrịa dị ize ndụ nye ụmụ nwanyị dị ime. N’ihi na ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara dị n’ahụ́ ndị inyom dị ime dị mkpa iji nọgide na-ahụ ike nke onwe ha na ụmụaka ha na-ebu. Na mgbakwunye, anaemia dịkwa ize ndụ n’oge usoro ọmụmụ. Iji merie ihe egwu nke anaemia n’ime ụmụ nwanyị dị ime, iri akwụkwọ Moringa nwere ike ịbụ otu ngwọta. Akwụkwọ Moringa nwere ike ịbawanye hemoglobin ka enwere ike igbochi ihe ize ndụ nke anaemia.
Na-egbochi ihe ize ndụ nke mgbagwoju anya na ụmụ nwanyị dị ime.
Nsogbu n’oge ime ime nwere ike ime onye ọ bụla. Iji gbochie nke a, ndị inyom dị ime kwesịrị iri nri dị mma nke nwere ihe oriri na vitamin. Akwụkwọ Moringa nwere ike ịbụ nhọrọ nri dị mma maka ụmụ nwanyị dị ime. n’ihi na akwukwo a nwere otutu ihe oriri na ihe ndi ozo choro n’oge ime ime.
Mụbaa mmepụta mmiri ara ehi ara.
Mmiri ara nne ma ọ bụ mmiri ara dị mkpa n’ihi na mgbe a mụsịrị nwa, nri bụ isi na-esite na mmiri ara ara. N’ụzọ dị mwute, ọ bụghị ụmụ nwanyị niile nwere ike ịmịpụta mmiri ara ozugbo ọ mụsịrị nwa, mgbe ụfọdụ ọ na-ebu ụzọ akwalite ka mmiri ara ehi wee pụta.
Akwụkwọ Moringa nwere mmetụta galactogogue dị ka akwụkwọ katuk. Mmetụta a nwere ike ime ka mmepụta mmiri ara ara mụbaa. Site na oke mmiri ara ara, enwere ike gboo mkpa nri nwa ọhụrụ.
Mụbaa Antioxidants mgbe Menopause gasịrị.
Enwere ike ibelata ọkwa antioxidant nke ụmụ nwanyị n’ihi mbelata mmepụta nke estrogen homonụ. Iji mụbaa antioxidants ndị a, a na-atụ aro iri akwụkwọ Moringa n’ụdị porridge. Ekwenyere na akwukwo Moringa na-abawanye antioxidants nke dị mkpa maka ịnọgide na-enwe ahụ ike.
Otu esi edozi akwụkwọ Moringa nke ọma
Ka e wee na-edobe uru nke akwụkwọ Moringa, ị ga-amarịrị ka esi edozi ya. Enwere ụzọ dị iche iche isi akụ akwụkwọ Moringa nke ọma, dịka ndị a:
Haziri n’ime tii.
Iji hazie akwụkwọ Moringa n’ụzọ dị otu a. Ị ga-ahụrịrị na akwụkwọ Moringa akpọnwụwo. Mgbe nke ahụ gasịrị, tinye akwụkwọ Moringa n’ime iko ma mee ya ka ị na-eme tii. Ị nwekwara ike ịgbakwunye shuga ma ọ bụ mmanụ aṅụ iji tinye ekpomeekpo.
Usoro a bụ usoro a na-ahụkarị. Mana otu a ka enwere ike iji akụkụ niile nke akwụkwọ Moringa mee ihe. Enwere ike ṅụọ mmiri a na-esi nri, a pụkwara iji akwụkwọ ndị ahụ esi nri mee salad.
Akwụkwọ nri nke Moringa na-apụta na ọ bụghị naanị na-atọ ụtọ kamakwa ọ bara ụbara uru. Enwere ike ime akwụkwọ nri Moringa ka ọ bụrụ inine doro anya na mgbakwunye nke ọka na-atọ ụtọ na ụfọdụ ngwa nri ga-eme ka ụtọ ahụ dịkwuo ụtọ.
Ozi ọma! Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa moringa agwụla site na iji akara nke onwe / akara moringa / akara ọcha nke ngwaahịa Moringa Oleifera – Kpọtụrụ anyị na ekwentị / whatsapp: +62-877-5801-6000
Previous post: Moringa útflytjandi og einkamerki Moringa framleiðsla
Next post: Onnmhaireoir Moringa & Lipéad Príobháideach Moringa Manufacture